अमेरिकीका लागि भिसा नीति परिवर्तन, शुल्क र अवधिका समेत हेरफेर !
ARCHIVE, NEWSPAPER » अमेरिकीका लागि भिसा नीति परिवर्तन, शुल्क र अवधिका समेत हेरफेर !
सरकारले अमेरिकी नागरिकलाई दिने प्रवेशाज्ञा (भिसा) शुल्क र अवधिमा परिवर्तन गरी अध्ययन, कामदार र पत्रकारसलगायत गैर पर्यटकीय भिसा समान बनाएको छ। अब दुवै देशले एकअर्काका नागरिकलाई दिने भिसा अवधि र लाग्ने शुल्क समान भएको छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।